Qarax dhacay G/Shabeelada Hoose oo ay kudhinteen 6 askari - Tilmaan Media
Wararka ka imaanaya Gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegaya in 6 askari ay ku dhinteen qarax miino oo loogu aasay wadada dhinaceeda.
Qaraxa ayaa lala beegsaday wafti uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Cabduqaadir Maxamed Nuur Siidii, waxaana la socday taliyaha ciidanka Danab Gaashaanle Axmed Cabdullahi Nuur Beeryare.
Wafdiga ayaa ka yimid Afgooye waxayna kusii jeedeen saldhiga millatariga ee Ballidoogle. Qaraxa ayaa dhacay markay marayeen degmada Tixsiile, waxaana lagu soo werinayaa inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh.
Al-shabaab ayaa sheegatay masuuliyada qaraxa, waxayna ku sheegeen qoraal kasoo baxay inay qaraxa ku dileen 4 kamid ah ciidamada Danab isla markaasna uu dhaawacmay taliyaha ciidanka Danab.